सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली बण्डहरू (CYH), १%% YTM छोटो परिपक्वताको साथ उच्च उपज प्रदान गर्दछ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B17B बजार समाचार
जनवरी 9, 2020 जनवरी 11, 2020 डोका कुकुरहरू ब्लग, बन्धन, व्यापार, कर्पोरेट बन्धन, डिविडेंड एरिस्टोक्राट्स, डोका कुकुरहरू, S&P 500 - २०२० को कुकुरहरू, विशेष समाचार, विश्वासघाती, स्थिर आय, आय अरिस्टोक्राट्स, निवेश
Q3 समान स्टोर शुद्ध अपरेटिंग राजस्व 4.1..१% वर्ष-बर्ष बढ्यो।
YTD (सेप्टेम्बर ,०, २०१ of को रूपमा) समान स्टोर अपरेटि reven राजस्व पनि २०१ 30 मा समान अवधिमा 2019% ले वृद्धि भएको थियो।
समान स्टोर Inpatient प्रवेश Q2.43मा २.2018% ले वृद्धि भयो।
सीवाइएचले बाह्य रोगी सेवाहरूमा पनि लगानी गरिरहेको छ, जसले कम्पनीको शुद्ध सञ्चालन राजस्वको% 54% प्रतिनिधित्व गर्दछ। थप रूपमा, हालसालै कम्पनीले सफलतापूर्वक विनिमय प्रस्ताव मार्फत आफ्नो profileण प्रोफाइलमा सुधार गरेको छ जसले कम्पनीलाई नगद प्रवाहमा सुधार गर्न र reducingण घटाउन जारी राख्न लामो रनवे दिनेछ। धेरै उद्योगहरूको विपरीत, स्वास्थ्य सेवा चक्रीय उद्योग होइन, तर सबै देश र संस्कृतिको लागि एक आवश्यक सेवा हो। डुरिगले पहिले यी बन्डहरुमा लगानी गरेको छ, र CYH को भर्खरको प्रदर्शन र लगभग १ mat% को परिपक्वता को उत्पादनलाई दिईएको छ भने यी बॉन्ड्स दुर्गको अतिरिक्त भारका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो। निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो, को एकत्रीकृत प्रदर्शन को तल देखाइएको छ।
तेस्रो क्वार्टर २०१ Results परिणामहरू
पछिल्ला केही वर्षहरू पोर्टफोलियो रेशेलाइजेशनमा केन्द्रित गरेपछि, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीले अब दुई ठोस क्वार्टर राख्यो, विशेष गरी उनीहरूको समान मापदण्डहरूमा। कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिकका हाइलाइटहरू (सेप्टेम्बर ,०, २०१ 30 समाप्त भएको तीन महिना) समावेश गर्दछ:
एक समान स्टोरको आधारमा, शुद्ध अपरेटिंग राजस्व क्यू 124 २०१ over मा $ १२4.1 मिलियन वा 3.१% ले वृद्धि भयो।
Q3 को लागि, समायोजित EBITDA कूल $ 388 मिलियन Q372 २०१ in मा32018२२ मिलियन को तुलनामा।
सेप्टेम्बर ,०, २०१ 30 समाप्त हुने नौ महिनाको लागि, समान स्टोरको शुद्ध अपरेटिंग राजस्व $ 2019 मिलियन वा 400% ले वृद्धि भयो।
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीका सीईओ वेन स्मिथ कम्पनीको तेस्रो क्वाटरमा नतिजाको साथसाथै वर्ष-देखि-तारीखसँग पनि खुसी छन्। "हाम्रो गुणस्तर, बृद्धि र अपरेटि efficiency दक्षता कार्यक्रमहरू मार्फत हाम्रो डिभस्टाइचर पूरा भएपछि हाम्रो ध्यान बढ्दो मार्जिन र नि: शुल्क नगद प्रवाहमा केन्द्रित छ र हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी उन्नत वृद्धिलाई अगाडि बढाउन राम्रो स्थितिमा छौं।"
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली विनिमय प्रस्ताव
सीआईएचले भर्खरै रिपोर्ट गरेको छ कि यसले २०२२ बाट बाँकी रहेका सबै outstanding.6.875% वरिष्ठ असुरक्षित नोटहरूको लागि विनिमय प्रस्ताव जारी गरेको छ। यस एक्सचेन्ज प्रस्तावको प्रारम्भिक नतिजाले स the्केत गर्दछ कि थोरै नोटहरूको outstanding १.२% वैध टेन्डर गरिएको छ। यस एक्सचेन्ज प्रस्तावको नतिजाले CYH को परिपक्वता प्रोफाइललाई निम्न रूपमा सुधार गर्न मद्दत पुर्‍यायो।
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली (NYSE: CYH) संयुक्त राज्य अमेरिकाका सब भन्दा ठूला सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्ने अस्पताल कम्पनीहरू मध्ये एक हो र देशभरिका समुदायहरूमा सामान्य तीव्र देखभाल अस्पतालहरू र बाहिरी रोगी सुविधाहरूको एक अग्रणी अपरेटर हो। कम्पनीले संयुक्त राज्य अमेरिका भर गैर शहरी र छनौट शहरी बजारमा यसको स्वामित्व राख्दछ र सम्बद्ध व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दछ र अस्पतालहरू मार्फत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यसले समुदाय र यसमा अवस्थित बिरामीहरूलाई बिरामीहरूका लागि सामान्य र विशेष अस्पताल स्वास्थ्य सेवा र बाह्य रोगी सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गरेर राजस्व उत्पन्न गर्दछ। हाल CYH देश भर १ 102 राज्यमा १०२ वटा अस्पतालको स्वामित्व राख्छ वा लीजमा दिन्छ। कम्पनीले आफ्ना बिरामीहरूलाई यसका सेवाहरूका लागि भुक्तानको माध्यमबाट राजस्व उत्पन्न गर्दछ। यी भुक्तानीहरू सरकारी एजेन्सीहरू (मेडिकेयर र मेडिकेड) निजी बीमा कम्पनीहरूबाट आउँदछन्, र सिधा बिरामीहरूबाट सेवा पुर्‍याइन्छन्।
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली विगतका केही वर्षहरु लाई अस्पतालको आफ्नो पोर्टफोलियो तर्कसंगत खर्च गरेको छ। र यसको मतलब कम्पनीले यसको केही अस्पतालहरूको बिक्रीको कारण राजस्व गुमाउँदै आएको छ, यसले अस्पतालको पोर्टफोलियोमा पनि अनुवाद गरेको छ जुन राम्रो प्रदर्शन गर्दै छ र वृद्धि प्रदर्शन गर्दैछ। बैंक अफ अमेरिका मेरिल लिंच २०१ Le लेभरेजेड फाइनान्स कन्फरेन्समा कम्पनीको भर्खरैको प्रस्तुतीकरणको यो स्लाइडले कसरी सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली समान स्टोर मेट्रिक्स क्यु and २०१ and र वाईटीडी २०१ both को दुबै लागि प्रयोग गर्दैछ भनेर देखाउँदछ।
हेल्थकेयरमा चल्तीहरू - बाहिरी रोगीहरूको हेरचाहको दिशामा सर्नुहोस्
प्रवृत्ति मध्ये एक जो स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्यलाई आकार दिन जारी बाहिरी रोगी हेरचाह र कम बिरामी देखभालतर्फ बढेको हो। स्वास्थ्य समाधानका लागि २०१ 2018 डेलोइट सेन्टर रिपोर्टले पत्ता लगायो कि बाहिरका बिरामी भ्रमणहरू, जसमा तत्काल हेरचाह केन्द्रहरू, एम्बुलेटरी सर्जरी सेन्टरहरू र खुद्रा क्लिनिकहरू २०० between र २०१ between बीच १ 14% ले वृद्धि भएको छ। थप रूपमा, २०१० देखि २०१ from सम्ममा सकल अस्पताल बाहिरी पेशागत आम्दानी% 2005% ले वृद्धि भयो। , प्रति भ्रमण $ १2015२ बाट visit १,। 45२ प्रति भ्रमण। र जब त्यो महँगो लाग्न सक्छ, विकल्पलाई विचार गर्नुहोस्।
वाशि Washington्टन विश्वविद्यालयले भर्खरै बिरामी र बाह्य रोगीहरूको हेरचाहको बीचको लागत भिन्नताको बारेमा विश्लेषण पूरा गर्‍यो। नतिजा आँखा पप्पी गर्दै छन्। सन् २०१ 22,000 मा औसत inpantant बस्न $ २२००० भन्दा बढी खर्च भयो, जबकि बाहिरी बिरामीहरुको लागत लगभग $०० को औसत छ। यस सहूलियत बिन्दुबाट, यो उपभोक्ता बाह्य बिरामी सेवाहरू किन रुचाउँछन् भनेर सजीलो छ। तर उपभोक्ताहरूले सुविधा, छोटो पर्खाइ समय र ब्यक्तिगत देखभाल बाहिरी पेशागत सेटिंगमा हेरचाहको कारणहरूको रूपमा पनि उल्लेख गरे। त्यसोभए कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम जस्ता अस्पताल कम्पनीहरूले यस प्रवृत्तिलाई कसरी प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? देशभरका अन्य धेरै अस्पताल प्रणालीहरू जस्तै उनीहरू बाहिरी रोगका क्षेत्रहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदैछन्। यहाँ प्रकार अनुसार कम्पनीको केयर स्थानहरु मा एक द्रुत हेराई छ।
यसको सबैभन्दा पछिल्लो त्रैमासिकको लागि, कम्पनीको शुद्ध अपरेटिंग राजस्वको% 54% बाहिरी रोगी सेवाहरूबाट आयो। साथै, बाह्य बिरामी प्रकारका सुविधाहरू र सेवाहरूमा लगानी गरेर, सीवाइएच गम्भिर स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता आफ्नै अस्पतालहरूमा पठाउन सक्षम छ, जसले बिरामीलाई निरन्तर हेरचाह प्रदान गर्दछ।
एक जारीकर्ताको आफ्नो अवस्थित serviceण सेवा गर्न वर्तमान क्षमताको रूपमा लगानीकर्ताहरूका लागि सूचकमा ब्याज कभरेज। तरलता पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले कम्पनीलाई नगद प्रवाहमा क्वार्टर देखि क्वार्टरमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। यसको सबैभन्दा पछिल्लो क्वार्टरमा, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूको १.335x को ब्याज कभरेजको लागि operating$259 मिलियन डलरको ब्याज खर्च र $ २1.3 million मिलियनको ब्याज खर्च operating 30$2019 मिलियन डलरको सञ्चालन आय थियो। तरलताको हिसाबले, सेप्टेम्बर ,०, २०१ as सम्ममा कम्पनीसँग नगद र नगद समकक्ष cash १157 cash मिलियन डलर थियो।
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूमा अपडेटहरू प्राप्त गर्न तल साइन अप गर्नुहोस्, र अधिक!
धितोधारकहरूको लागि जोखिम यो हो कि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूले यसको operatingण भार सम्बोधन गर्न जारी राख्दै यसको परिचालन परिणामहरू सुधार गर्न सक्दछ। सब भन्दा भर्खरको क्वार्टर Q2 को ठोस प्रदर्शनमा निर्माण गर्दछ, समान स्टोर मेट्रिक्सले वर्ष-बर्ष-वर्ष सुधारहरू देखाउँदै। साथै, सबैभन्दा भर्खरको विनिमय प्रस्तावले CYH को matण परिपक्वता प्रोफाइलमा ठूलो सुधार गरेको छ। यी विकासहरूले यी शेष २०२२ बन्धनहरूलाई लगानीकर्ताको विविध आय पोर्टफोलियोमा ठोस थप गर्दछ
वर्तमानमा, मेडिकेयर / मेडिकेड भुक्तानीले CYH राजस्वको %०% बनाउँछ। यी राजस्वहरू प्रतिपूर्ति जोखिमको अधीनमा रहन्छन्, विशेष गरी बुढ्यौली जनसंख्याले स्वास्थ्य सेवा खर्चहरू निरन्तरता दिइरहेको छ जसले संघीय र राज्य बजेटमा अतिरिक्त वित्तीय बोझ राख्छ। थप रूपमा, चिकित्सा र मेडिकेड बिलि inमा जटिल नियमहरू समावेश छन् जुन कम्पनीहरूले पालना गर्नै पर्दछ र यी नियमहरूको कुनै पनि उल्ल bre्घनले CYH का लागि महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
स्वास्थ्यसेवाको अनुहार परिवर्तन हुन थालेपछि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली पनि परिवर्तन हुँदैछ। कम्पनीले बाहिरका साइटहरू थप्ने क्रममा अस्पतालहरूको आफ्नो पोर्टफोलियो तल राखेको छ ताकि बिरामीहरू सहजै यसको हेरचाहको निरन्तरता पहुँच गर्न सक्दछन्। समान स्टोर मेट्रिक्स राम्रो देखिन्छ र कम्पनीले सफलतापूर्वक आफ्नो debtण परिपक्वता प्रोफाइल सुधार गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा एक आवश्यक सेवा हो। व्यक्तिलाई चोटपटक र रोगको लागि हेरचाह आवश्यक पर्नेछ। र यी CYH २०२२ बन्डहरू, परिपक्वतामा १ about% उपज लिदै, लगानीकर्ताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा भाग लिने राम्रो अवसर प्रदान गर्छन्। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यी २०२२ बन्धनहरू डुरिगमा थप तौलका लागि उपयुक्त छन् निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो.
परिपक्वता को लागी: ~ 17.0%
डुरिग क्यापिटलले लगानीकर्ताहरूलाई विशेष, पारदर्शी फिड्युसिएरी सेवा एकदम कम लागतमा प्रदान गर्दछ। हाम्रो FX2 (विवेकी व्यवस्थापन) पोर्टफोलियो समयसँगै हाम्रो FX1 (गैर विवेकी) पोर्टफोलियोलाई अत्यधिक प्रदर्शन गर्‍यो, FX1 को रिटर्न उल्लेखनीय रूपमा उच्च (दुई पटक डबल) दिने। हाम्रो व्यावसायिक सेवाले बॉन्डको फराकिलो स्पेक्ट्रम, उच्च उत्पादन, र कम मूल्य पोइन्टहरूमा पहुँच सक्षम गर्दछ जुन प्राय कम कुशल बजारमा फेला पर्दछ, तर धेरै बन्ड सेवाहरूमा प्रमाणित हुँदैन।
प्रकटीकरण: डुरिग क्यापिटल र केही ग्राहकहरूले सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली फेब्रुअरी २०२२ बॉन्डमा पदहरू लिन सक्छन्।
स्वचालित ट्यूब लेबलिंग प्रणाली मार्केट उत्पादकता बढाउँछ